Muuri News Network » Xog Deg Deg ah: Mucaaradka Dowlada Farmaajo oo kala shakisan, & Gurigii lagu shiri jiray oo lagu kala tagay…
Xog Deg Deg ah: Mucaaradka Dowlada Farmaajo oo kala shakisan, & Gurigii lagu shiri jiray oo lagu kala tagay…
illo muhiim ah ayaa inoo sheegay in Siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowlada uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay gurigii ay ka degenaayeen Muqdisho ka guureen ka dib dhaqaalo xumo soo wajahday.
Culeyska ugu weyn ee Dowlada Farmaajo ayaa soo ifbaxay ka dib markii ay midoobeen mucaaradka, waxaana hormuud u ah xisbiga Damu Jadiid oo talada dalka uu kala wareegay Madaxweyne Farmaajo, balse waxaa soo baxaya in khilaaf soo kala dhex galay ka dib dhaqaalo yari xoogan oo soo wajahday.
Si kastaba ha ahaatee midowga Mucaaradka Dowlada ayaa walwal xoogan ku hayay Madaxda dalka, balse waxaa farxad u ah inay dhaqaalo xumo soo wajahday, sababaha keenay in guriga weyn ay Muqdisho ka dageen Mucaaradka ku kala cararaan iyo lacagihii ay heli jireen inay waayeen.
illo kale oo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku guuleystay in uu la hishiiyo imaaraadka taasoo keentay lacagtii imaaraadka ee lagu mucaaradayay dowlada ay meesha ka baxday.
waxaa kale oo jira sida xogta ay sheegeyso kala shaki weyn iyadoo xumo muhiim u ahaa mucaaraadka dowlada ay la safteyn Madaxweyne Farmaajo.
Lasoco Xog dheeraad ah dhawaan: